कतारमा २२ बर्षे नेपाली केटोलाई फाँसी ? भारतियलाई मारेको झुटो आरोप ! आमा बुवाको रुवाबासी (भिडियो हेर्नुस) - TajaNp News
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/कतारमा २२ बर्षे नेपाली केटोलाई फाँसी ? भारतियलाई मारेको झुटो आरोप ! आमा बुवाको रुवाबासी (भिडियो हेर्नुस)
16,815 1 minute read
बिनोद रानाभाटको परिवारको यो कारुणिक भिडियोलाई सबैले शेयर गर्नुहोला । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, इमो जहां जहां शेयर गर्नमिल्छ सबैतिर सेयर गरौं । जे नेपालमा आफ्नो देश, आमा र परिवार सम्झेर आंशु पिईरहेका मोहनलाई नेपाल झिकाउन मृतक भारतियको परिवारले २ लाख ६० हजार कतारी रियाल व्लड मनी मागेको छ । अर्थात नेपाली रकम ८२ लाख भएमात्र मोहनलाई देश फिर्ता गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली मिलेर सबैले सहयोग गरे, मोहन चांडै नै नेपाल फिर्ता हुनेछन् । यो परिवारको आंशुलाई हेरेर सबैले सहयोग गरौं ।
बिनोदलाई आफ्नै छोरानाती सम्झेर सबैले सहयोग गरौं । एउटा निर्दोष नेपालीलाई बिदेशमा फांसीको सजाय हुनबाट बचाऊं, म शिशिर भण्डारी सबैलाई दुई हात जोडेर बिन्ती गर्दछु । सहयोग गर्नका लागि बिनोदका बुवाको मोबाईल नं र खाता नं हामीले स्क्रिनमा र कमेन्टमा पिन गरेर राखेका छौं । हामी मार्फत् सहयोग गर्न म शिशिर भण्डारीलाई ९८११००६९२९ मा सम्पर्क गर्नुहोला, यो नं मा इमो, फाईबर दुईटै छ । फोन गर्न नसक्ने अवस्था छ भने म्यासेज छोड्नुहोला । आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने सबैले भिडियो शेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला । सबैले नेपाली र नेपाली भाषी मनकारी नेपाली मांझ यो भिडियो पुर्याऊं ।
इन्जिनियर बन्न अष्ट्रेलिया गएका सेढाई रातो बाकसमा फर्कदै